China China Fekitori 8M 10M Inopenya gadzirisa Mhepo Inonyengera Pool Kuyangarara Inflatable Yoga Mat 0395 Gadzira uye fekitori | Yamazonhome
China Fekitori 8M 10M Inotaridzika Gadzirisa Mhepo Inonyengera Pool Inoyangarara Inflatable Yoga Mat 0395
China Fekitori 8M 10M Inotaridzika Gadzirisa Mhepo Inonyengera Pool Kuyangarara Inflatable Yoga Mat 0395
Chigadzirwa Chigadzirwa: Inflatable Yoga Mat
Chigadzirwa Chigadzirwa: Amal-0395
Nzvimbo yekugadzira: Weifang, Shandong
Chinyorwa: PVC neEVA
Kukura: 600 * 100 * 10cm, 200 * 33 * 3cm, yakagadzirirwa
Ruvara: dema, bhuruu, pink, girini, yakagadzirirwa
Mharidzo yekugadzirira nguva: inenge vhiki imwe
1.Product Zita Inflatable Yoga Mat / Mhepo Track
2.Brand Zita YITEK
3.Nzvimbo yeKutanga JiangSu, China
5.Zvinhu DWF uye PVC
6 Size 6x1x0.1 M
7.Rudzi Dema, Dzvuku, Bhuruu, Mindi, Pepuru, Pinki
Kupfuura gumi Colors
8.Product Feature Inotakurika & Inoyerera
9.MOQ 1 Piece
10.Standard Sample Nguva 4-7days
11.Kushandisa Mitambo Yemvura, Kugumburwa, Yoga, Gymnastics, Nezvimwewo
13.Package Zvinoenderana NeChikumbiro Chemutengi
Iwo anodhira mapulagi uye iyo inflatable plug
Iwo maplagi anoputirwa uye iplagi inokwenenzverwa yakanyatsogadzirwa kuti ive nemhepo yepamusoro, kudzivirira guruva rekubvisa uye kuiswa zvisina kurongeka pasina kubvaruka.
Iyo yemhando yepamusoro kudhirowa yakawedzeredzwa mukati, uye iyo yekudhirowa zvinhu inogadzirwa nemhete uye yekudhirowa zvinhu, ine yakasimba inobata kugona uye isina deformation.
Push mubato wepamusoro tembiricha yekutengesa tekinoroji inowedzera hupenyu hwebasa hwechigadzirwa, inovandudza mashandiro echigadzirwa uye kuchengetedzeka kwemushandisi.
Kudzika-kwakadzika kudzidza uye kuita kwekaviri kutsemura. Isu tinopedzisa chimwe nechimwe chigadzirwa seyakagadzirwa nemaoko, saka isu tine yakanakisa yakapetwa kaviri-rukoko kurongedza tekinoroji.
Yedu kambani mukana
Iyo ine yakasimba yemhando yekudzora system uye inonakidzwa nemukurumbira wakanaka mumusika. Nyanzvi yehunyanzvi uye akakwana michina inopa yakanakisa kugadzirwa kugona uye yakasimba hunyanzvi kugona, uye iwo mashoma odhiyo huwandu inoganhurira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Fekitori yemakwikwi mitengo uye imwechete-yekumira yepamusoro masevhisi anopa anokurumidza uye panguva yakakodzera kuendesa masevhisi kune vatengesi vepamhepo senge Amazon.
2. Nendege kana neGungwa kana yakakura Dhiimendi, Airport / Port ichitambira;
3.Vatengi vanojekesa vekutakura zvinhu kana nzira dzekutaurirana dzinotaurirana!
4. Nguva yekuendesa: 1 ~ 3 mazuva ekushanda kana uine mudura; Mazuva 3-7 kana uchitanga odha, zvinoenderana nehuwandu.
1.Pamusoro peRudzi & Saizi:
Mavara akasiyana uye saizi yesarudzo yako. Uye zvakare, iwe unogona kuendesa saizi yako kufekitori yedu yekugadzirisa.
bhegi, makatoni, tsika ruvara bhokisi, rakarukwa mabhegi.
Nguva yakajairwa mazuva mashanu kusvika gumi, kana kurongeka kuri kudiki diki, tinogona kuzviita pakutanga. Mukupesana, kana qty yakanyanyisa kukura, isu tichaona iyo qty kuve nechokwadi chekutumira nguva.
4. Nezve sevhisi:
Mibvunzo ichapindurwa panguva yedu yekutanga yekugamuchira. isu tiri vapachokwadi, nyanzvi, isu tichava nguva dzose padivi pako, isu tinokushandira iwe pamberi peodha nzvimbo kusvikira iwe uchitengesa kunze.
EXW, FOB, CIF, pasuo nesuo, chero eiwo anowanikwa kwatiri.
6. Nezve Kuongorora:
Kuongorora izvo zvinhu zvisati zvawanikwa nemupi mupi.
Kuongorora iyo yakatemwa zvinhu swatch usati watanga kuburitsa.
Kutarisa kusona kwese uye maitiro kana uchigadzira.
Kuongorora inflatable mapedhi usati warongedza.
Kuongorora iyo qty kana yakarongedzwa mubhokisi
Kuongorora makatoni ese asati atumirwa.
7.Iyo yenguva dzose maitiro emabhegi kugadzirwa:
Kugadzirwa kweMisa simbisa-Tenga zvinhu-kucheka-kutanga kugadzira uye kusona nhanho-nhanho-inflatable kutarisa-kurongedza-kutumira.
Pashure: Nyore Windsor Mubhedha Solid Wood Mubhedha Wemubhedha Mubhedha Princess Bed # 0114
Zvadaro: Grooved mubato wakapetwa kaviri-kudhirowa pamubhedha kabati solid huni parutivi kabati # 0121
Nordic Nyore Solid Wood Inogona Kumutswa uye Lowe ...
Nordic Rakajeka Solid Wood Diki Apartment Livin ...
Kurarama Kamuri Nhevedzano Tsuro Yaiba 0246
Gymnastics Mhepo Mat 2m 3m 4m nyanzvi Inflat ...
Kugadzira Little Wood Hofisi #Sofa Yevana 0185